Health Archives - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး နေ့စဥ်စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ
Min Thuta | Food, Health | September 10, 2020
အခုလို Covid 19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဥ် ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေမဲ့အစားအစာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ဟင်းချက်တဲ့အခါထည့်သွင်းချက်ပြုတ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ပန်းငရုပ်ပွဟာဆိုရင်လည်း Antioxidant ကြွယ်ဝစွာပါရှိတဲ့အတွက် စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလဲကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝစွာပါစေတဲ့အပြင် နှလုံးရောဂါနဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကိုပါကာကွယ်လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကိုလက်စထရော ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
ဒီအစားအစာတွေကို စားသုံးပေးပြီး ကိုယ်ခံအားကျန်းမာသန့်စွမ်းအောင် နေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
(အပြင်ထွက်လျှင် Mask တပ်ပါ၊ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါ၊ အပြင်ကပြန်လာပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် ဆေးကြောပါ)
Min Thuta | Food, Health | August 20, 2020
အခုလို မိုးတွင်းကာလမှာ ကော်ဖီပူပူလေးနဲ့ တန်ပူရာကြော်လေးနဲ့ တွဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင် လုံးဝကို Perfect ဖြစ်သွားစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အဆာပြေပဲစားစား ထမင်းပူပူလေးနဲ့ပဲစားစား ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာလို့လည်း ပြောလို့ရတဲ့ အရသာရှိတဲ့တန်ပူရာကြော်နည်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
Min Thuta | Health, Knowledge | March 23, 2020
လက်ရှိအချိန်မှာပိုပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းများလာတဲ့ Covid 19 ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရောက်ရှိသေးပေမဲ့လည်း ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းကထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အဆိုပါရောဂါကို မိမိရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့တိုက်ထုတ်နိုင်ရန် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးမဲ့ အစားအစာများကိုစနစ်တကျရွေးချယ်စားသောက်တတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးဟာ Vitamin C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
နနွင်းဟာ ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီး အဖျားရောဂါ စတာတွေဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Acidic ဖြစ်ပြီး Vitamin C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင်အဆိပ်အတောက်အတွေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
ပျားရည်ဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး Antioxidant ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူဟာ သွေးကြောပိတ်တာကိုကာကွယ်ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပွားမှုတွေမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Vitamin A ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခွန်အားကိုတိုးပွားစေပါတယ်။
Green tea မှာ Antioxidant ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေကာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပန်းမုန်လာစိမ်းမှာဆိုရင် Vitamin A,E,C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ပြည့်စေပါတယ်။
Covid 19 ရောဂါကူးစက်မှုမှရန်မှ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ
Min Thuta | Health, Knowledge | March 17, 2020
လက်ရှိအချိန်မှာပိုပြီး ကူးစက်မှုနှုန်းများလာတဲ့ Covid 19 ကိုကျနော်တို့တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေ လုပ်နိုင်မလဲ? ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိသားစုတွေ ရောဂါပိုးကူးစက်မှု မဖြစ်ရအောင်…
Min Thuta | Health, Knowledge | March 10, 2020
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လက်ဆေးခြင်း ဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို တစ်ဘဝလုံးလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေမယ့် နည်းလမ်းတကျဆေးဖြစ်ရဲ့လား ? ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဟန့်တားအောင် စနစ်တကျဆေးဖြစ်ရဲ့လား စတာတွေကိုသတိထားဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့ စနစ်တကျလက်ဆေးနည်းကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
Min Thuta | Health, Knowledge | February 9, 2020
မိတ်ဆွေသင်ဟာ စပျစ်သီး ကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာကို ဖတ်သွားသင့်ပါတယ်။ စပျစ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့…
Min Thuta | Health, Knowledge | February 3, 2020
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ Coronavirus ပြန့်ပွားနေပြီး သေဆုံးသူ ၂၀၀ ကျော်အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အနည်းငယ်တွေ့ရပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 7:21 am.